रामचन्द्र भट्टराई | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) रामचन्द्र भट्टराई
on: September 02, 2012 अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
प्रबन्धक, आर्यतारा इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्युरिटिज
बैङ्किङ वार्ता :
‘नयाँ ब्रोकर थपिएपछि व्यापार तीनगुणा बढेको छ’
नयाँ ब्रोकर कम्पनीका रूपमा सञ्चालन तयारी गर्नुभएको छ । तपाईंहरूको व्यावसायिक योजना कस्तो छ ?
यही भदौ १८ गते सोमवारदेखि कारोबार शुभारम्भ गर्दै छौं । हाम्रो प्राथमिकतामा मध्यम किसिमका लगानीकर्ता रहनेछन् । काठमाडौंकेन्द्रित बजारलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने सोचमा छौं । अनुकूल वातावरण र कारोबार प्रणालीमा पनि सुधार भएमा केही वर्षभित्र बुटवलमा शाखा (रिमोर्ट वर्क स्टेशन) खोल्ने योजना छ । काठमाडौंपछिको सम्भावित बजार बुटवल हो । हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरू पश्चिम क्षेत्रका पोखराबाहेक अन्य स्थानमा गएका छैनन् । तर, पश्चिमाञ्चल र मध्यमपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रमा पनि लगानीको सम्भावना अत्यधिक रहेकाले ती क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तार गर्ने हाम्रो योजना हो । ती क्षेत्रका लगानीकर्तालाई यो बजारबारे प्रशस्त जानकारी प्रदान गर्न सकिएको छैन । उनीहरू लगानीमा संलग्न भए भने समग्र बजार विस्तारमा पनि सहयोग पुग्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सफ्टवेयर परिवर्तन गरी अनलाइन कारोबार प्रणाली शुरुआत हुन सके उपत्यकाबाहिरका शहरमा पनि सजिलै कारोबार विस्तार गर्न सकिन्छ ।
ब्रोकर कम्पनी र लगानीकर्ताबीच कस्तो सहकार्य भएको पाउनुभएको छ ?
अहिले ब्रोकर कम्पनी र लगानीकर्ताबीच खासै समस्या देखिएको छैन । तर, सबै किसिमका लगानीकर्ताले ब्रोकरहरूबाट समान व्यवहार पाउन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । अहिले यी समस्या समाधान हुँदै गएका छन् ।
अपेक्षित रूपमा बजार सुधान हुन नसकेको अवस्थामा तपार्इंहरूले कस्तो बजार रणनीति अपनाउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले बजार विस्तार गर्ने भनेको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हो । यो क्षेत्रमा जसको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छ, त्यसले राम्रो व्यापार गर्न सक्छ । यो कुरा थपिएका ब्रोकरहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् । किनकि, अहिले पछि थपिएका अधिकांश ब्रोकर कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको छ । अहिले नेप्सेमा दैनिक औसत व्यापार रू. २ करोडबाट बढेर रू. ६/७ करोड पुगेको छ । त्यसैले, पछि थपिएका ब्रोकरहरूमध्ये कतिपयले ठूलो परिमाणमा व्यापार गरिरहेका छन् । उनीहरू सक्रिय रूपमा व्यवसाय विस्तारमा लागेकाले पनि यस्तो भएको हो । हामी भने संयमित भएर बजार विस्तार गर्दै जानेछौं ।
थप ब्रोकरहरूको प्रवेशले बजारमा व्यापार बढेको भन्नुभयो । अहिले त विकास बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयरमा लगानी बढाइरहेकाले व्यापार बढेको होइन र ?
हो, यसमा द्विविधा छैन । तर, बजारको वृद्धिमा ब्रोकरहरूको केही योगदान छैन भन्ने होइन । ब्रोकरहरूले अहिले प्राप्त गरेको भूमिकाअनुसार नै उनीहरूले बजार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याएका छन् । ब्रोकरहरूको कार्यक्षेत्र विस्तारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सहयोग गरेमा नै आगामी दिनमा बजार अझ विस्तार हुन सक्छ । ब्रोकर कम्पनीहरूमार्फत मार्जिन लेण्डिङ र परामर्श सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
शेयर बजारको अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
अहिले बजार सुधारात्मक अवस्थामा छ । नेप्से परिसूचकमा धेरै अङ्कको घटबढ नदेखिए पनि कारोबार रकम बढ्दै गएको छ । यसले बजारमा लगानीका लागि पर्याप्त रकम रहेको बुझिन्छ । पछिल्लो समय विकास बैङ्क र फाइनान्सले शेयर खरीद कर्जा प्रवाह गर्न शुरू गरेका छन् । यसले पनि लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ । पछिल्ला दिनमा संस्थागत लगानीकर्ता (विकास बैङ्क, फाइनान्स र बीमा ) बजारमा सक्रिय देखिएका छन् । यी संस्थाहरूले बजारमा लगानी गर्नु भनेको बजार अझै बढ्ने अवस्थामा छ भन्ने हो ।
किनभने, उनीहरूले पनि बजार अध्ययन गरेर नै लगानी गर्छन् । त्यसैगरी, ती कम्पनीहरूले जलविद्युत्, व्यापारमूलक र उत्पादनमूलक समूहका कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गरेका छन् । यसले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नेछ । यसैगरी सीडीएस, सामूहिक लगानी कोष र क्रेडिट रेटिङ कम्पनी सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छन् । यसले पनि बजार विस्तारमा धेरै सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । समग्रमा पूँजीबजारमा आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेकाले पनि आगामी दिनमा शेयर बजारले सुधारको बाटो पछ्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।